I-Apple isungula ukuFunda kwentliziyo, usetyenziso lokulawula isifo sentliziyo | IPhone iindaba
Iingxaki zentliziyo ziqhelekile, ngaphezulu kunokuba sinokukholelwa. Kodwa ukuba sinezixhobo esinazo zokulindela iziphumo ezibi, kufuneka sizame ukufumana okungcono kuzo. I-Apple iyazi kakuhle malunga noku, yiyo loo nto yazisa iqonga loPhando ukwenzela ukuba oogqirha nabaphandi bakwazi ukufumana idatha ethembekileyo kwizifundo zeklinikhi.
Ewe, ukuthatha inyathelo eliya phambili, kunye nokusebenzisana neYunivesithi yaseStanford, I-Apple isungula iApple yentliziyo yeApple. Le app, ekhululekile kodwa okwangoku isebenza eUnited States, ijolise ekufumaneni olona lwazi luvakalayo kumavolontiya.
Njengoko kuxeliwe ngu-Apple uqobo, Ukufa kwe-130.000 kunye nezibhedlele ezingama-750.000 zenzeka minyaka le e-United States ngenxa ye- i-fibrillation ye-atrial yentliziyo. Ke, abasebenzisi abakhuphele esi sifundo seNtliziyo se-Apple baya kuvumela amaqela e-Apple ukuba arekhode inqanaba lentliziyo kwaye anike ingxelo kwangoko nje xa kubhaliswa okungaqhelekanga. Ewe kunjalo, ukwenza ufundo, iApple Watch kunye nezivamvo zayo zangasemva ziya kusetyenziswa kwii-LEDs.
Kwangokunjalo, umsebenzisi obhalisayo uthe ukungahambi kakuhle kwinqanaba lokufunda kwentliziyo, Uya kufumana umyalezo osisilumkiso kwi-Apple Watch yakho kwaye uza kuxelelwa ukuba ungabakho kwi-ofisi yomnye wabaphandi beprojekthi.. Baza kuqhubeka nokwenza i-electrocardiogram.
Okokugqibela, isifundo seNtliziyo se-Apple siyafumaneka kubasebenzisi abaneminyaka engama-22 ubuncinci kwaye iyahambelana ne-Apple Watch Series 1 nangaphezulu. Okwangoku, iYunivesithi yaseStanford iya kuqhuba isifundo apho iya kuqinisekiswa khona ukuba ukusetyenziswa kwe-Apple Watch kunyango kunokuba yenye indlela Ixesha elitsha kukhathalelo lwempilo, ukongeza kuncedo kuphando kunye nokufumana idatha ethembekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » Apple Watch » I-Apple isungula ukuFunda kwentliziyo, usetyenziso lokulawula isifo sentliziyo
Inomdla kakhulu, kodwa ungayikhuphela phi okanye ngaba ithengiswa kuphela kwintengiso yaseNyakatho Melika? Enkosi
I-Apple inyusa i-30 yezigidi zeedola ukuxhasa umlo ochasene noGawulayo